चीनको सन्तान नीति - China Radio International
चीनको सन्तान नीति
(GMT+08:00) 2016-05-13 18:22:39
एउटै मात्र? अर्को पाउने बेला भएन? अब एउटा छोरी चाहियो नि!कसो ? अनि के छ त अब छोरो पाउने विचार छैन? यस्ता-यस्ता धेरै-धेरै प्रश्नवाचक शब्दहरू र वाक्यहरू साथीभाइ, इष्टमित्र अनि परिवारका सदस्य र आफन्तजन्‌ले दुई सन्तान ईश्वरको वरदान भन्दै विवाहित जोडीलाई थप सन्तान पाउन आग्रह गर्दै भन्ने/सुन्ने गरिएका छन् र भन्दै/सुन्दैआएका छौं। अनि यस्ता दम्पती जसको एक मात्र सन्तान छ र अर्को सन्तानको इच्छा नगरेकाले चिनियाँ नीति अङ्गालेको भन्ने/सुन्नेगरिन्छ या भन्ने/सुन्नेगरेका छौं। हो। यसै भन्थे। तर महँगी, कामको व्यस्तता र बच्चा हुर्काउनलाई समय दिननसक्दा या साँच्चीकै इच्छा नहुँदा पनि अब सजिलै उम्कन नपाइने भयो- चिनियाँ नीतिको नाममा। किनकी चीनले सन् 2016 जनवरी एक देखि चिनियाँ दम्पतीले दुई सन्तान जन्माउन सक्ने कानूनलाई स्वीकृत गरेको छ। अर्थात् करिब पैंतीस बर्षअघिको 'एक सन्तान नीति'लाई खारेज गरी 'दुई सन्तान नीति'अघि सारेको छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन आयोगका उपमन्त्री वाङ फै आनका अनुसार, 'दुई सन्तान नीति'लागु भएसँगै हालको अवस्थामा नौ करोड चिनियाँ दम्पती दोस्रो सन्तानका लागि योग्य छन्। त्यस्तै आउने वर्षहरूमा नवशिशुको सङ्ख्याको वृद्धि दरसँगै एकै वर्षमा अधिकतम दुई करोडसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। साथै सन् 2030सम्ममा चीनको जनसङ्ख्या एक अर्ब पैंतालिस करोड पुग्ने अनुमान पनि गरिएको छ।
चीनले सन् 1980को दशकमा जनसङ्ख्या वृद्धि रोक्नका लागि एक सन्तानको नीति ल्याएको थियो। तर, सन् 2015 अक्टोबरमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले एक सन्तान नीतिलाई परिवर्तन गर्दै दोस्रो बच्चा जन्माउने चाहने दम्पतीलाई त्यसका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। योसँगै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सी चिन फिङको सभापतित्वमा बसेको केन्द्रीय समितिको राजनीतिक विभागले 'दुई सन्तान नीतिलाई'अनुमोदित गर्दै परिवार नियोजनसम्बन्धी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, 'चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले चीनको जनसङ्ख्या र परिवार नियोजन सेवालाई विशेष महत्व दिँदै चीनको जनसाङ्ख्यिकीय तथा विकास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढ्नेछ।'
लामो प्रयासपछि चीनको अस्तव्यस्त जनसङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्दै चिनियाँ नागरिकको जीवनमा सुधार आएको र चिनियाँ नागरिकको चाहनालाई सम्मान गर्दै दुई सन्तान नीतिलाई स्वीकारेको जनाइएको छ। चीनमा लागु गरिएको जनसङ्ख्या नियन्त्रणसँगै वृद्ध समाजको बाहुल्यता र आगामी दिनमा कार्यशील जुझारु जनशक्तिको कमी हुन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै दुई सन्तान नीतिलाई स्वीकार गरिएको हो।
सन् 1949मा नयाँ चीनको स्थापनासँगै जनसङ्ख्या वृद्धिका लागि जनतालाई धेरैभन्दा धेरै सन्तान जन्माउन आग्रह गरिएको थियो। नयाँ चीनको स्थापनापछि भएको आर्थिक पुनरत्थानसँगै मानिसहरूको जीवनस्तर पनि उकासियो र त्योसँगै जनसङ्ख्यामा अत्याधिक वृद्धि हुन गयो। सन् 1970सम्म आइपुग्दा चीनको जनसङ्ख्या 54करोडबाट 83करोड पुग्यो जसबाट दैनिक जीवनका आधारभूत आवश्यक वस्तुका लागि ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्‌यो। त्यसबाट आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठूलो बाधा उत्पन्न भयो। यो समस्याको मूल जरो बढ्दै गरेको जनसङ्ख्या भएको निष्कर्षसँगै सन् 1970को आरम्भसँगै जनसङ्ख्याको गतिलाई घटाउन परिवार नियोजन नीति शुरु गरेको थियो। यस बीच परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग र ढिलो विवाह गर्न आह्वान पनि गरियो। 'एउटा बच्चा होइन है साह्रै कम, तीन अति धेरै र दुई बच्चा एकदम ठीक' यस्ता खालका नाराको पनि प्रचार-प्रसार गरिएको थियो। त्यसपछि सन् 1980मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट युवा लीगका सबै सदस्यहरूलाई जनसङ्ख्या नियन्त्रणका लागि खुला-पत्र जारी गर्दै एक सन्तान नीतिको पक्षमा समर्थनका लागि आह्वान गरेको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि एक सन्तान नीतिलाई संविधानमा लेखेर राष्ट्रिय नीतिको रुपमा घोषणा गरिएको थियो।
बितेका पैंतीस वर्षमा यस एक सन्तान नीतिले असाधारण उपलब्धि हासिल गरेको छ। प्रथमतः यसले आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई पछाडि धकेलेको अवस्था र अत्याधिक जनसङ्ख्या वृद्धिदरलाई आफ्नो पकडमा राख्न सफल भयो। मानिसको जीवनस्तर समृद्ध हुनाका साथै पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध रह्यो। आर्थिक, सामाजिक विकास तथा सामाजिक आधुनिकीकरणसँगै समाजको समग्र विकासमा एउटा बलियो आधार खडा भएको छ। चीनमा मात्र होइन सारा विश्वको जनसङ्ख्या तथा गरिबी न्यूनिकरणमा पनि यस नीतिले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ। यदि त्यस बेला यस नीति लागु नगरेको भए हाल भोकमरीमा परेको कुनै अफ्रिकी मुलुक झैं हुने थियो। यो नीति लागुपछि हालसम्म अनुमानित चालिस अर्ब नवजात शिशुको जन्मलाई रोक्न सफल भएको छ।
अबको यो सार्वभौमिक दुई सन्तान नीति सबै गाउँ, शहर, प्रान्त र सबै जातजातिलाई अर्थात् चीनभरि लागु गरिएको छ। हुन त सन् 1984मा नै एक सन्तान नीतिमा केही परिवर्तन ल्याइएको थियो। यदि पहिलो सन्तान छोरी भए अर्को सन्तान पाउनसकिने नियम गाउँघरमा प्रचलित थियो। उता सरकारी कर्मचारीलाई दोस्रो सन्तानको लाभ थिएन। त्यस्तै हानबाहेकका अरु अल्पसंख्यक जातिलाई दोस्रो सन्तान जन्माउनमा कुनै रोकटोक थिएन। सन् 2002मा दम्पती दुवै नै एक्लो सन्तान हो भने दोस्रो सन्तान पाउनसकिने नियम लागु गरिएको थियो। अनि सन् 2013मा 18औं चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रिय समितिको तेस्रो पूर्ण सत्रपछि स्थानिय निकायले चयनात्मक दुई सन्तान नीतिलाई अघि सारेको थियो। त्यस समयमा दम्पतीमध्ये कुनै एक जना एक्लो सन्तान हो भने दोस्रो सन्तान पाउने छुट दिइएको थियो। यसका लागि विभिन्न प्रचार-प्रसार र सम्बन्धित निकायका कर्मचारी घर-घर गएर तथ्याङ्क सञ्चालन गरिएको थियो। यसबाट 17 लाख 60 हजार योग्य दम्पतीले दोस्रो सन्तानका लागि आवेदन दिएका थिए। जुन निरन्तर बढ्दै गएको थियो। साथै सन् 2014मा अघिल्लो वर्षको दाँजोमा चार लाख सत्तरी हजार भन्दा बढी शिशुको जन्म भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो नै परिवार नियोजन नीतिलाई समायोजित तथा सुधार गर्ने महत्वपूर्ण कडी बन्यो र पछि गएर सार्वभौमिक दुई सन्तान नीति लागु हुनपुग्यो। यसरी चीन सरकारले जनताको माँग, खुशी र राष्ट्रको आवश्यक्ता र परिस्थिती हेरेर सन्तान नीतिमा फेरबदल गर्दैआएको थियो।
हाल चिनियाँ जनसङ्ख्याको वृद्धि दर घट्दै गइरहेको स्थितीमा वृद्ध-वृद्धाको सङ्ख्या बढ्दै जानु र कार्यशील युवाको उमेर घट्दै जानु चीनका लागि टाउको दुःखाइको विषय बन्दै गएको छ। त्यस्तै पुरुषको दाँजोमा महिलाको लिङअनुपातमा अति नै असमानता अर्को समस्या बन्दै गएको छ। त्यसमाथि एक सन्तानको नीतिका कारण गर्भमा नै धेरै छोरीको जीवन चुँडाइएको छ। हाल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रिय कमिटी र राज्य परिषदले जनसङ्ख्या तथा परिवार नियोजनलाई अति नै गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। राष्ट्राध्यक्ष सी चिन फिङ तथा प्रधानमन्त्री ली ख छ्याङलगायत अरु शीर्ष नेताहरूले यससम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्देशन दिँदैआएका छन्। सन् 2015को आरम्भदेखि नै राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन आयोग र अरु सरकारी निकायबीच 13औं पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिमा जनसङ्ख्या विकास रणनीतिलाई कसरी अघि बढाउने पक्षमा गहन छलफल भएको थियो।
सन् 2050सम्ममा 15देखि 59 वर्षसम्मका करिब3करोड कार्यशील व्यक्ति थपिने अनुमान छ जसबाट दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक वृद्धि दरलाई निरन्तर अघि बढाउन सहयोग गर्नेछ। अल्पकालीन रुपमा पनि महिला तथा बाल स्वास्थ्य सेवा, वस्तु र शिक्षालगायतका क्षेत्रमा बढ्दो माँगसँगै लाभ पुग्नेछ। यो नीति करोडौं घर-परिवारको स्वास्थ्य र खुशीसँग जोडिएको छ। यसका लागि चीन सरकारले आमा र नवशिशुका अवस्थामा पनि आवश्यक सुरक्षा कदम चालिरहेका छन्। यसलाई सफल बनाउन चीन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन।
साथै अर्को एक सन्तानको चाह गर्ने दम्पतीका लागि यो ठूलो अवसर नै भएको छ र हाल चालिस नाघेका महिलाहरू पनि फेरि सुत्केरी बन्ने तयारीमा छन्। दुई सन्तानका लागि योग्य महिलामा पैंतीस वर्षमाथिकाको सङ्ख्या 60 प्रतिशत रहेको छ। जनाइए अनुसार, हालको अवस्थामा नौ करोड चिनियाँ दम्पती दोस्रो सन्तानका लागि योग्य छन्। त्यस्तै आउने वर्षहरूमा नवशिशुको सङ्ख्याको वृद्धि दरसँगै एकै वर्षमा दुई करोडसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
यसबाट कतिपय चिनियाँ दम्पतीले दोस्रो सन्तानका लागि विदेशिनु पर्ने छैन त्यसै गरी जरिवानाको रुपमा ठूलो रकम गुमाउनु पर्ने छैन। चलचित्रकर्मी चाङ्ग यिमौ र उनकी श्रीमतीलाई गत वर्ष 2015मा तेस्रो सन्तान प्राप्तिपछि सात करोड पचास लाख चिनियाँ यूआन जरीवाना तिराइएको थियो यो नै सम्भवत अत्याधिक जरिवाना रकम हुनुपर्छ। त्यसबाहेक कतिपय बालबालिका जन्मेलगत्तै आफ्ना आमाको ममता र वात्सल्यबाट विमुख हुनुपर्ने छैन। त्यस्तै पूर्व सिद्धान्तलाई पछ्याउँदै आएका दम्पतीहरूमध्ये कतिपयको एक्लो सन्तानको असमायिक निधन भएबाट अपूरणीय क्षति पुगेको छ त्यस्ताको आवाजले पनि अब न्याय पाएको छ। साथै एक्लो सन्तान भएबाट पाइने केही फाइदाबाहेकका अनेकन् अहितकर अवस्था र प्रतिकूल परिस्थितिबाट हालको पुस्ताले मुक्ति पाउने छ।